> Resource> iPhone> Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Moto X na 1 Pịa
Dị nnọọ ahapụ gị ochie iPhone na-awụlikwa elu mmiri iji Motorola Moto X? Ike na-eche nyefee kọntaktị site na iPhone ka Moto X? Ọfọn, ọ bụghị ihe insanely siri ike na-eme kọntaktị nyefe. Ọ bụrụ na ị na-na na costumed na ọrụ site na Verizon, T-Mobile, att & T na Sprint, ị nwere ike ịga ụlọ ahịa ha maka kọntaktị nyefe.
Otú ọ dị, ị na-adịghị na-aga a ogologo ụzọ nyefee iPhone kọntaktị na Moto X. Kama, ị nwere ike dị nnọọ ịnọ n'ụlọ na-eme ya na ala. Ihe niile ị chọrọ ime bụ nwere ndị ọkachamara ekwentị transfer ngwá ọrụ - Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ngwá ọrụ a na-enye gị nyefee kọntaktị niile na gị ochie iPhone ka Moto X na Otu click.
Download MobileTrans idetuo kọntaktị site na iPhone ka Moto X.
Cheta na: Na MobileTrans, ị nwere ike nyefee kọntaktị site na iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 4S, iPhone 3GS na iPhone 4 na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9 Moto X.
Nzọụkwụ 1. Launch ekwentị transfer ngwá ọrụ na kọmputa
Ka malitere, wụnye na ẹkedori MobileTrans na kọmputa. Mgbe ahụ, bụ isi windo na-egosi. Họrọ ekwentị na ekwentị Nyefee mode na pịa Malite.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na Moto X na kọmputa
Mgbe ahụ, jikọọ ma nke gị ochie iPhone na Moto X na kọmputa site ịkwụnye n'ime USB cables. The software ga-akpaghị aka na-agụ data o gị iPhone na Moto X na mgbe ahụ-egosipụta na ha na isi window. Gị iPhone-egosi na n'elu na ekpe, na Moto X na nri.
Ọ bụrụ na ị chọrọ efu nke ekwentị akwụkwọ na gị Moto X ịzọpụta ndị si iPhone, ị nwere ike nne Mmetụta anya Doro Anya data tupu oyiri.
Cheta na: Ka ibugharịa kọntaktsị, kalinda, music, videos, SMS na foto site na Moto X ka iPhone, ị dị nnọọ mkpa pịa "tụgharịa" ma na-agbaso nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 3. iPhone kọntaktị na Moto X
Site ndabara, kọntaktsị, kalinda, ederede ozi, music, videos na foto na-ekwe ka-zigara gị Moto X. Iji nyefee kọntaktị naanị, ị kwesịrị ị na-ewepụ akara tupu ihe ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, ọ bụ oge idetuo iPhone kọntaktị na Moto X. Pịa Malite Copy na-eche maka sekọnd. Na, na, na kọntaktị na Ama gụnyere ọrụ aha, adreesị ozi-e, ụlọ ọrụ aha ga-depụtaghachiri gị Moto X.
Ị na-ahụ, na ihe mfe nkuzi banyere otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka Moto X. adaba na oge na-azọpụta, ọ bụghị ya? Ugbu a, na-enye onye ọ bụla a oku na-amasị gị!
Cheta na: Mgbe kọntaktị transfer, ị pụrụ iji Wondershare MobileGo for Android, ihe dị mfe na-eji Android njikwa, jikwaa ihe niile na gị Moto X site na kọmputa.
1.How iji Hichapụ pọdkastị site iPhone